भोजन कुर्सी, सोफा, भोजन तालिका, प्लास्टिक कुर्सी, पु कुर्सी - फोरम्यान
टियानजिन फर्मन फर्नीचर उत्तर चीनको बीचमा एक अग्रणी कारखाना हो जुन १ 198 8 mainly मा स्थापित गरिएको छ जुन मुख्यतया खाने कुर्सि र टेबुल प्रदान गर्दछ।
बजार वितरण युरोपमा %०%, संयुक्त राज्य अमेरिकामा %०%, दक्षिण अमेरिकीमा १%%, एशियामा १०%, अन्य देशहरूमा%% छ।
फोरम्यानसँग १० भन्दा बढी प्रोफेशनल सेल्सम्यानको साथ ठूलो बिक्री टोली छ, अनलाइन र अफलाइन बिक्री मार्ग संयोजन गर्दै, र सँधै देखाउँदै ..
डिजाइन भनेको प्लास्टिकको कुर्सीको लागि आत्मा हो। सीट मूल वातावरण अनुकूल polypropylene सामग्री बाट बनेको छ। यो कुर्सी सामान्यतया इनडोर-प्रयोग हो, ऊन्टी-यूवी सामग्री र आउटडोर पाउडर कोटिंगको साथ आउटडोर-प्रयोग पनि हुन सक्छ। जस्तो कि लचिलो पपी प्लास्टिकको सुविधा हो, तपाईं बस्न यो धेरै आरामदायक पाउनुहुनेछ।
भोजन कुर्सी पृथ्वीबाट नै प्रेरित हुन्छ, यस शाखा जस्तो कुर्सीले कुनै पनि स्थानमा परिष्कृत शान्तिको तत्व थप गर्दछ। यसको कडा प्लास्टिक मोल्ड गरिएको सिटले आधुनिक कूलको हावाको लागि एक कटआउट बाँसको डिजाइन फिचर गर्दछ, भान्छा, कार्यालय, वा आँगनको लागि उपयुक्त।
कुर्सी धातु र काठबाट बनाइएको, यसको फ्रेम जोडी ए ang्गल खुट्टाहरू क्रसक्रसिंगले जडान गरी गोडा खुट्टाको साथ समर्थन गर्दछ। एउटा प्लास्टिक बकेट सीटले यी सबैलाई एकसाथ जोड्दछ, ठोस र show्ग प्रदर्शन गर्दछ। आर्म सिट कपडाले ढाकिएको मौलिक वातावरण मैत्री पॉलिप्रोपाइलिन सामग्रीबाट बनेको हुन्छ। जस्तो कि लचिलो पपी प्लास्टिकको सुविधा हो, तपाईं बस्न यो धेरै आरामदायक पाउनुहुनेछ।
बच्चा कुर्सि, सानो कुर्सी १18१18 - बच्चाहरू #
आधुनिक सेटले तपाइँको बच्चाको बस्ने ठाउँको लागि एक स्टाइलिश अपील थप गर्दछ। एर्गोनोमिक कुर्सीले इष्टतम सान्त्वनाको लागि घुमाएको पछाडि डिजाइन छ। यो सीट मूल वातावरणमैत्री polypropylene सामग्रीले बनेको छ र खुट्टाहरू ठोस काठको फ्रेमले बनेको छ लचिलो यस सुविधाको सुविधा हो। पीपी प्लास्टिक, तपाईं बस्न यो धेरै आरामदायक पाउनुहुनेछ।
यो भोजन तालिका सor्कलकको वस्तु हो जुन घर वा अफिसमा, बाहिर पनि विभिन्न वातावरणमा बहुमुखी प्रयोगको साथ हुन्छ। यसले कफि र चियाको समय, दिउँसो पढ्ने, काम गर्ने, तपाईको मनपर्दो फूलदान र बोटहरू प्रदर्शन गर्ने, र तपाइँको रिमोट कन्ट्रोललाई अलग राख्ने धेरै सतह क्षेत्र प्रदान गर्दछ।
गुस्सा गिलास शीर्ष आगो ढु stone्गा सतह संगमरमर dini ...
संगमरमरको टेबुल साना परिवारहरूसँग अनुरूप छ किनकि तिनीहरू प्रभावकारी निषेधको प्रतिरोध गर्न सक्षम छन्, सजिलै फोहोरको सम्पर्कमा पर्दैन र कुनै पानीले तालिकालाई काठ जस्तो बिगार्न सक्दैन। बरफ खाने खाने टेबल टेबल क्रिस्टल संरचना द्वारा ढु stone्गा को लागी सजीलो छ र प्रक्रियामा, तालिका चमकीले र विरोधी विरोधी काम कवर गर्न प्रयोग गरिन्छ, पहिले भन्दा छिटो सफा। क्लेभरेस्ट तालिका बहुविध प्रकार्यहरूसँग डिजाइन गरिएको तालिका हो, जुन टेबल, चिया टेबुल वा टेबुल हुनसक्दछ, युटिलिट ल्याउनका लागि ...
भोजन तालिका T-15
सानो परिवारहरूको लागि विशेष रूपमा बनेको गोल शीर्ष खाने टेबलले तपाईंको घरलाई क्लासिक लुक दिनेछ। यो साधारण बनाएको भोजन तालिका यसको सानो आयाम को कारण चार व्यक्तिको पकड गर्न सक्छ तर के यो विशेष र वास्तविक आँखा क्याचर बनाउँछ। राउन्डटप टेबलले व्यक्तिलाई नजिक ल्याउँदछ त्यसैले परिवार वा साथीहरूसँग सबैभन्दा उत्तम समय बिताउने अवसरलाई नभुल्नुहोस्। टिकाऊ MDF को साथ बनेको र प्रत्येकको मुनि प्याडको साथ धातु खुट्टाहरू क्रसबाट तपाईंको भुइँ बचाउन, तपाईं पाउनु हुन सक्छ ...
भोजन तालिका T-15L
T-15L: गोलाकार किनारहरू सुरक्षा संरक्षण, MDF टिकाऊ डेस्कटप सामग्री, सुरुचिपूर्ण डिजाइन।
प्लास्टिक कुर्सी १666666 बच्चाहरू
डिजाइन भनेको प्लास्टिकको कुर्सीको लागि आत्मा हो। सीट मूल वातावरण अनुकूल polypropylene सामग्री को बनेको छ, धातु खुट्टा फ्रेम पाउडर लेपित वा काठ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यो कुर्सी सामान्यतया इनडोर-प्रयोग हो, ऊन्टी-यूवी सामग्री र आउटडोर पाउडर कोटिंगको साथ आउटडोर-प्रयोग पनि हुन सक्छ। जस्तो कि लचिलो पपी प्लास्टिकको सुविधा हो, तपाईं बस्न यो धेरै आरामदायक पाउनुहुनेछ।
प्लास्टिक कुर्सी - F803 #
प्लास्टिक कुर्सी BV #
यस प्लास्टिक कुर्सीको लागि, सबै केडी संरचना प्रकाश स्थान हो, धेरै सानो प्याकेज जुन अनलाइन बिक्रीको लागि उपयुक्त छ। कुर्सी सबै मौलिक वातावरण-अनुकूल polypropylene सामग्री को बनेको छ, यसको मूल, सुरुचिपूर्ण डिजाइन संग, कि कुनै पनि ध्यान दिएन र रंगीन विकल्प जान सक्नुहुन्न।
प्लास्टिक बार कुर्सी- १8080० #
डिजाइन भनेको प्लास्टिकको कुर्सीको लागि आत्मा हो। बार कुर्सी पूर्ण मौलिक वातावरणमैत्री polypropylene सामग्री बाट बनेको छ। तपाईंको छनौटहरूको लागि रंगीन विकल्पहरू। यो बार कुर्सी सामान्यतया इनडोर-प्रयोग हो, आउटडोर-प्रयोग पनि हुन सक्छ। जस्तो कि लचिलो पपी प्लास्टिकको सुविधा हो, तपाईं बस्न यो धेरै आरामदायक पाउनुहुनेछ।
प्लास्टिक कुर्सी १88१ #
सोफा F813 #
फोरमान एक अग्रणी कारखाना हो जुन सधैं मूल डिजाइनहरूमा केन्द्रित हुन्छ। यो सोफा सेटको उच्च सिफारिश गर्नुहोस्, नरम कुशनमा सिट गर्न वा सुत्न यति सहज छ। कुशन र पीपी प्लास्टिकको साथ संयुक्त, यो फेसन सेन्सले भरिएको छ र कम्तिमा १ 150० किलो भारको समर्थन गर्न सक्ने बलियो छ। तपाईं यसलाई तपाईंको बैठक कोठामा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईंको उत्कृष्ट जीवनको आनन्द लिन! कुनै रंग उपलब्ध छ, तपाईको सोधपुछको लागि पर्खदै!
प्लास्टिक भोजन कुर्सी Shelly #
डिजाइन भनेको प्लास्टिकको कुर्सीको लागि आत्मा हो। जस्तो कि लचिलो पीपी प्लास्टिकको सुविधा हो, तपाईं बस्नको लागि यो धेरै आरामदायक पाउनुहुनेछ। रमाईलो र आधुनिक भोजन साईड कुर्सी जसले दुवै घर र बाहिरी भोजन क्षेत्रहरूको प्रशंसा गर्दछ। एक फ्रि-प्रवाहित न्यूनतम शैलीको साथ बनाईएको, आधुनिक डिजाइनका आधारभूत तत्वहरूलाई उदारतापूर्वक आकारको सीटको साथ संयोजन गर्दछ र इष्टतम मुद्राको लागि रणनीतिक स्थितिमा ब्याकरेस्ट। पूर्ण रूपमा स्ट्याकेबल छ, पूर्ण रूपमा जम्मा हुन्छ, र गैर-एमको साथ आउटफिट हुन्छ ...
थोक बहु-स्थान उपलब्धता प्लास्टिक चाई ...
हामी अनुभवी निर्माता हौं। कारखानाको लागि यसको बजारको महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्रहरूको बहुमत WINE प्रत्यक्ष चीन साइड कुर्सी मोड आपूर्ति ...
डेन्भर रेस्टुरेन्टहरू आउटडोर डिको साथ रचनात्मक हुन्छन् ...
चीनबाट प्रसिद्ध फर्नीचर डिजाइन कम्पनी
बाँस प्रयोग तपाईंको घर सजिलो गर्न एक उत्तम तरिका हो
आज त्यहाँ अनौंठो डिजाईनका लागि विदेशी फर्नीचरको साथ घर सजाउने धेरै तरिकाहरू छन्। चाहे तपाईं एशियाई वा पश्चिमी सजावट मन पराउनुहुन्छ, तपाईं अन्तर हुन सक्छ ...